ကိုယ်နဲ့ မသင့်လျော်တဲ့လူနဲ့ တွဲမိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိသာစေမယ့် အချက် (၆)ချက် - For her Myanmar
ကိုယ်နဲ့ မသင့်လျော်တဲ့လူနဲ့ တွဲမိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိသာစေမယ့် အချက် (၆)ချက်
သူ့ကိုဆက်လက်တွဲသင့်လား၊ လက်မတွဲသင့်ဘူးလားဆိုတော့ …….
ချစ်သူရှိတဲ့ယောင်းတွေ၊ Relationship ရှိတဲ့ယောင်းတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့လက်တွဲနေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်မှာ သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အစစ်အမှန် ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလားဆိုပြီး တွေးဖူးခဲ့တဲ့အချိန်တွေများ ရှိခဲ့လား။ အဲဒီလို တွေးတတ်တာက သဘာဝကျပြီးလူတိုင်းလိုလိုပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်ဖူးကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လောက်အထိပဲ ချစ်ပါစေ… သူနဲ့ ကိုယ်ဟာ လက်တွဲဖော်အစစ်အမှန်မဟုတ်ရင် ရှေ့ဆက်သွားရမယ့် လမ်းခရီးဟာမချောမွေ့နိုင်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် သူနဲ့ကိုယ်ဟာတစ်ကယ်မှန်ကန်တဲ့လက်တွဲဖော်တွေ ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာတွေးကြည့်ရုံတင်မကဘူး သေသေချာချာဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိချစ်သူက ကိုယ်နဲ့ တကယ်သင့်လျော်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နဲ့ လုံးဝ မသင့်လျော်တဲ့ လူလားဆိုတာကို ဒီအချက်တွေနဲ့ စစ်ကြည့်ပါဦး…
အချစ်ရေးသက်တမ်းတစ်ခုမှာ ရန်မဖြစ်တဲ့ စုံတွဲဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ရန်ဖြစ်ရခြင်းဟာလည်း အချစ်ရေးတစ်ခုမှာ သူမပါရင် မပြည့်စုံဘူးလို့တောင် ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အရာရာတိုင်းမှာ အတိုင်းအတာဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကိစ္စသေးသေးလေးကနေစပြီး အကြီးကြီးတွေအထိ အရာရာတိုင်းမှာ သဘောထားကွဲလွဲနေတာ၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မပေးနိုင်တာ ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ခရီးလမ်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်နေပါပြီ။
၂။ သူနဲ့အတူရှိနေချိန်တွေဆို အလိုလိုနေရင်းမပျော်မိတော့ဘူးလား
ချစ်ကြသူတွေဆိုတာ အမြဲလိုလို တွေ့ချင်မြင်ချင်နေကြတာ သဘာဝပါပဲ။ အဲဒီလို သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အတူရှိနေကြတာက ဝတ္တရားတစ်ခုလို ဖြစ်နေရသလို အတူရှိနေချိန် မပျော်တာ၊ ဘယ်အချိန် သူ့ဘေးနားက ထသွားရမလဲလို့ စဉ်းစားနေမိတာ ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သူနဲ့ကိုယ်ဟာ တကယ့်လက်တွဲဖော်တွေဖြစ်ကြဖို့ ရာခိုင်နှုန်းနည်းသွားပါပြီ။
Related Article>>> Relationshipတစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခါနီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းများ
တွဲထားတဲ့လက်တွေ လျော့ရဲနေပြီလား ….
၃။ ဘဝအတွက် မတူညီတဲ့ စံနှုန်းတွေရှိတာ
လူတွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ထားရှိတဲ့စံနှုန်းတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ ဘဝအတွက် လက်ခံထားတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ မတူညီကြပါဘူး။ လူသားအားလုံး မတူညီကြတာ သဘာဝကျသလို အားလုံးတူညီအောင်လုပ်ဖို့လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထာဝရ လက်တွဲသွားရမယ့်သူတွေမှာ ဒီလို မတူညီမှုတွေရှိနေရင် တစ်သက်လုံး အဆင်ပြေပြေ လက်တွဲသွားဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ တစ်ယောက်က ဘဝမှာ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ အေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲနေသွားလို့ရမယ့် ဘဝမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ပြီး ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ဘဝမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေပဲကြုံရပါစေ ချမ်းချမ်းသာသာ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ အများအားကျတဲ့ ဘဝမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုး၊ တစ်ယောက်က အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ ဆောင်ရွက်ချင်ပေမဲ့ တစ်ယောက်က ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်၊ အများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နေရပေမဲ့ ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ ဘယ်သူမှ ပြန်ကြည့်မယ့်သူမရှိဘူး။ ဒီလိုခံယူချက်မျိုးရှိနေရင် ဒီအချစ်ခရီးလမ်းက ဖြောင့်ဖြူးသာယာဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။
၄။ ကိုယ်ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်ဘက်က ရပ်တည်ပေးသူလား
ကိုယ်လမ်းမှားရောက်နေတာကို ထောက်ခံပေးတာမျိုး မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ထောက်ခံအားပေးတတ်တဲ့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မကြောက်နဲ့ မင်းနဲ့ငါအတူရှိတယ်လို့ အားပေးတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတာတစ်ကယ့်ကံကောင်းမှုပါ။ ကိုယ် ဘာပဲလုပ်လုပ် အပြစ်မြင်နေတတ်တဲ့သူ၊ ကိုယ်နဲ့ ဘယ်သူပဲ ပြဿနာတွေဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘက်က ခံစားနားလည်မပေးတတ်သူ ဒီလို လူမျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်အဖြစ် ထာဝရလက်တွဲသွားဖို့ဖြစ်သင့်ရဲ့လားဆိုတာကို စဉ်းစားသင့်နေပါပြီ။
၅။ အယူပဲရှိပြီး အပေးမရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးလား
အချစ်ရေးတစ်ခုဆိုတာ အပြန်အလှန် နားလည်ယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ရတာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်အတွက် သူလိုအပ်ရင် အနစ်နာခံပေးသလိုမျိုး သူ့အတွက် ကိုယ်လိုအပ်ရင်လည်း အနစ်နာခံပေးရမှာပါ။ ဒါဟာလည်း အပြန်အလှန်ဖြစ်သင့်တာမို့ ကိုယ်ကပဲ အရာရာသူ့ကိုနားလည်ပေးရ အနစ်နာခံပေးရဖြစ်နေပေမဲ့ သူကတော့ ကိုယ်လိုအပ်ရင် မသိသလို မဆိုင်သလိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုဘာကြောင့်ဆက်ပြီး လက်တွဲနေဦးမှာလဲ။
၆။ အပြန်အလှန် လေးစားမှုရော ရှိရဲ့လား
ချစ်သူတွေဆိုတာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားသမှုရှိဖို့ အရေးအကြီးဆုံးပါ။ တစ်ဖက်သားက ကိုယ့်ကို မလေးစားဘူးဆိုတာကို သိနိုင်တာတွေကအများကြီးပါ။ နှုတ်အားဖြင့် ကိုယ့်ကို မချေမငံဆက်ဆံတာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားရအောင်လုပ်တာ၊ ကာယကံမြောက်လည်း ကိုယ့်ကို ထိခိုက်ခံစားရအောင်လုပ်တာ ဒီလိုအချက်တွေအားဖြင့် ကိုယ့်ကို လေးစားသမှု မရှိဘူးဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို လေးစားမှုမရှိသူနဲ့လည်း ရှေ့ဆက်လက်တွဲဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ဒါတွေကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့လက်တွဲဖော်အစစ်အမှန် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေပါပဲ။ ဘဝဆိုတာအရှည်ကြီးမို့ ကိုယ့်လက်တွဲဖော် မဖြစ်သင့်တဲ့သူနား အပင်ပန်းခံပြီး ဆက်မနေဖို့ အကြံပေးပါရစေ ယောင်းရေ။ အခုအချိန် ကိုယ့်ဘေးနားမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ်နဲ့ မသင့်လျော်သူနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်မှ တစ်ချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်စစ်စစ်နဲ့ တွေ့ဆုံရမယ့် အခွင့်အရေးကို ရနိုင်မှာပါနော်။ အဲဒါဆိုရင် ကိုယ့်ဘဝကြီးက အရမ်းကို သာယာလာမှာ အမှန်ပါပဲ။
References – independent, bustle, elitedaily
Tags: Letter from heart, lifestyle, love, Relationship, tips, ways
၂၀၁၈ ဇူလိုင်လအတွက် ရာသီခွင်အလိုက်ယောင်းတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာ
Sugar Cane July 3, 2018